Ihe 10 kachasị mma ịme na Madrid | Akụkọ Njem
Akụkọ Njem | | Madrid
Madrid bụ obodo jupụtara na ohere, nke na-enye ọtụtụ ọdịbendị na oge ezumike. Kwesịrị iji nọrọ ogologo izu ụka, isi obodo Spanish jupụtara na Ogwe, ihe ncheta na n'okporo ámá zuru oke maka ịga ije na ịmara obodo ahụ n'ụzọ miri emi. N’echiche a, ụzọ dị mma iji mata obodo nwere ike ịbụ site na ịme a njem efu na Madrid na Guruwalk. Ọzọ, anyị na-amam ndị top 10 ihe dị mkpa iji mee na Madrid, otu n'ime obodo ndị kachasị mma na España.
1 Art ije
2 Ebe a na-akpọ Retiro Park
3 Zọ ụkwụ
4 Ama egwuregwu Santiago Bernabéu
5 Obí eze
6 Templelọ nsọ nke Debod
7 Ọnụ ụzọ nke anyanwụ
8 Terraces nke La Latina
9 Ogwe mmanya nke Chueca
El Paseo del Arte na-agbatị otu kilomita na ogologo ebe Prado Museum, Thyssen-Bornemisza Museum na Reina Sofía Museum dị. Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ileta ha niile, ọ ga-ekwe omume ịnweta Paseo del Arte Card nke gụnyere ntinye na atọ ahụ. 2019 bụkwa ụbọchị pụrụ iche iji gaa na Prado Museum ebe ọ bụ na afọ a ọ na-eme afọ abụọ ya. E nwekwara ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ndị ọzọ dị ka wax Museum ma ọ bụ ihe ngosi ihe mgbe ochie nke kwesịrị ileta.
Ebe a na-akpọ Retiro Park
Willgaghị enwe ike ịsị na ịmara Madrid ma ọ bụrụ na ịgaghị ogige Retiro. Weere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akpa ume nke obodo, na Retiro Park mejupụtara hectare 118 ebe ị nwere ike ịga ije, ịnya ụgbọ mmiri ma ọ bụ nwee picnic. N'etiti ubi ya dị iche iche, nke a ma ama bụ ogige Vivaces, ubi Cecilio Rodríguez na Rosaleda. Na Retiro Park, e nwekwara nke a maara dị ka Palacio de Cristal, nke a na-eji taa eme ihe ngosipụta.
El Rastro na-eme n'ụtụtụ Sọnde na ụbọchị ezumike ma nwee ogologo akụkọ ihe mere eme, ebe ọ bụ na ọ dị afọ 250. N'ime ya ị nwere ike ịchọta site na akwa aka abụọ, akwụkwọ na arịa ụlọ gaa ihe ndị na-achịkọta ihe n'ezie. Ejiri ya na mkpọda Ribera de Curtidores, na agbata obi Lavapiés, ekwupụtala ahịa Rastro dị ka Ihe Nketa Omenala nke Ndị Madrid.
Ama egwuregwu Santiago Bernabéu
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụghị nnukwu onye na-agba bọl, ọ ka bara uru ileta Ama egwuregwu Santiago Bernabeu. N’ịbụ nke e guzobere n’afọ 1947, o nwere ikike karịrị mmadụ 80.000. Gaa na ya ị nwere ike ịgagharị njem gụnyere gụnyere ịbanye mpaghara mpaghara dị ka igbe ndoro ndoro, ebe egwu ma ọ bụ ime ụlọ ndị egwu. Mgbe ị na-eme njem ahụ, ị ​​nwekwara ike ịhụ trophies ndị Real Madrid nwetara site na oge.
Royal Obí bụ nnukwu obí eze na Western Europe dum, nwere ihe karịrị ụlọ 3.000 gbasaa na square mita 135.000. Taa, Obí bụ oghere echekwara naanị maka mmemme nke ememme steeti, agbanyeghị na enwere ike ịga leta ya. Gburugburu nke Royal Obí bụ otu n'ime ebe kachasị mma iji nwee ọwụwa anyanwụ na obodo Madrid. N'ihe eji arụ ụlọ, Obí ahụ dị iche na ndị ọzọ site n'ụdị Baroque ya.
Templelọ nsọ nke Debod
Lọ nsọ nke Debod bụ ebe ọzọ kachasị mma iji nwee ọwụwa anyanwụ na abalị nke kpakpando. N'ịbụ nke dị na Parque del Cuartel de la Montaña, ụlọ ọrụ Ijipt a nyere gọọmentị nke mba ahụ nyere Spain maka igbochi ya ịla n'iyi n'ihi idei mmiri nke nrụrụ mmiri.. N'ime ụlọ ahụ, ị ​​nwere ike ịchọta amụma ọdịyo ebe a kọwara akụkọ ihe mere eme na nkọwa ndị ọzọ gbasara ụlọ nsọ ahụ n'ụzọ zuru ezu.
Ọnụ ụzọ nke anyanwụ
Puerta del Sol bụ akara ngosi obodo, ebe njikọta na ọtụtụ ngagharị n'okporo ámá. O nwekwara ụfọdụ akara ngosi ndị nnọchi anya obodo ahụ: elekere Casa de Correos, ihe ncheta Kilometa Zero na akpụrụ akpụ nke Bear na Osisi Strawberry..
Terraces nke La Latina
Okpokoro ndị dị na agbata obi La Latina so n'ime ndị mara mma na Madrid niile. Ọ bụ ezie na enwere ọnụahịa dị iche iche, na njem ị ga-aga n'obodo ahụ, ọ bara uru ịhọrọ ụlọ ọrụ dị oke ọnụ nke na-enye anyị echiche ndị dị egwu, menu dịgasị iche na njirimara ziri ezi nke na-akọwa agbata obi.
Ogwe mmanya nke Chueca
Chueca ka bụ otu n'ime ógbè Madrid ndị nwere ọtụtụ ndụ abalị. Jupụta na obere Ogwe na ụlọ mmanya, agbata obi ahụ nwere ụfọdụ ụlọ ọrụ pụtara ìhè dịka Bar Chicote, nke akpọrọ n'oge atọ dị ka mmanya kacha mma na Europe. Agbanyeghị, na Chueca enwere ọtụtụ ebe dị iche iche na-esi na obere ụlọ oriri na ọ culturalụ culturalụ ndị obere gaa ụlọ oriri na nkwari abalị. N'etiti ndị nke mbụ, ime ụlọ Libertad 8 pụtara ìhè, ebe n'etiti ndị ikpeazụ a maara dị ka Teatro Barceló TClub.
Ije ije na Gran Vía bi na Madrid otu narị percent. N'ịbụ nke jupụtara na ụlọ ahịa na nnukwu ikuku, Gran Vía bụ otu n'ime isi n'okporo ámá ndị dị na obodo ahụ, yana okporo ámá ndị a kasị mara amara na isi obodo Spanish.. Na ije na Gran Vía ị nwere ike ịhụ Buildinglọ Ihe Obodo Metropolis, ụlọ Telefónica, Palacio de la Prensa, Rialto Theater, Plaza de Callao na España Building.
O doro anya na enwere ọtụtụ ndị ọzọ ebe ndị dị mkpa na Madrid iji zuo ezu ndepụta a 'ihe ị ga-ahụ'Ọ bụ ezie na isi ihe 10 ndị a nwere mmasị, ị nwere ike ịmalite ịmata ọdịbendị, nka na akụkọ ihe mere eme nke isi obodo Spanish.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Madrid » Ihe 10 kacha elu ị ga-eme na Madrid